Muxuu yahay ujeedka Ahlu Sunna ee hadda dagaalka u billowday? | Warbaahinta Ayaamaha
Muxuu yahay ujeedka Ahlu Sunna ee hadda dagaalka u billowday?
MUQDISHO-AYAAMAHA-Xiisad ayaa weli ka taagan gobolka Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya kaddib markii dhawaan ciidamo ka tirsan ururka Alhu Sunna Wal Jamaaca ay qabsadeen magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, Khamiistiina uu dagaal culus ka dhacay deegaanka Bohol oo qiyaastii 30 KM u jira magaalada Dhuusamareeb, halkaas oo ay dad ku dhinteen.
Hoggaamiyaha ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in maamulka Galmudug meeshii uu la dagaallami lahaa Al-Shabaab ay soo weerareen ururka Alhu Sunna.
Qaar ka mid ah Sanatarada iyo Xildhibaannadda ka soo jeeda deegaannada Galamudug gaarahaanna magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ayaa si adag ugu eedeyay xoggaga Ahlu sunno Waljameeca inay ka soo horjeedaan nabadda iyo degganaashaha ka jira deegaannadaasi ayna donayaan in ay xukunka xoog iyo xabad kula wareegaan.
Sanator Cabdixakiim Macalim oo ka mid xildhibaannada cusub ee Aqalka Sare kuna matala dowladda federaalka degaannada xiisadu ka taagantahay ayaa sheegay in aysan aqbali doonin tallaabooyinka Ahlu Sunna ay qaadayso ayna u arkaan kuwo ay ku radainayaan waddo ay gorgortan kula galaan dowladda cusub ee la filayo in ay timaaddo.
“Wadaaddaan siyaasiinta ah ee xillalka iyo xukunka doonaya anigu sidaan u arko waxay dhaqan ka dhigteen dowlad walba marka ay afar sano dhamaato oo mid kale la soo dhisayo inay xoog ciidan adeegsadaan oo ay isa soo muujiyaan oo markaasi ay raadiyaan qorshayaal cusub oo dowladda cusub ay qayb uga noqdaan”ayuu yiri Sanatar Cadixakiim Macalin.
Wuxuu sheegay in ilaa iyo hadda aaney garaneynin waxa ay tabanayaan ama ay rabaan Culuma-udiinka Ahlu sunno oo sida uu sheegay horey deegaanka uga tagay iyaga oo qanacsan si wanaagsanna loo sagootiyay.
Xildhibaan Mahad Salaad oo isana ka mid ah Xildhibaannada federaalka Soomaaliya ee wakhtigoodu sii dhamaanayo kana soo jeeda Galmudug ayaa horey bartiisa faceboog ugu soo qoray qoraal uu ku muujinayay inuu ka soo horjeedo tallaabooyinka soo cusboonaaday ee Ahlu sunno ka bilowday deegaannada Galmudug. Qoraalka Xildhibaan Mahad ayaa sidaan u dhignaa “Galmudug waxay leedahay maamul iyo madax la doortay. Ciidamada Qaranka iyo kuwa Galmudug oo furimo cadow ku furanyihiin kuwa dhabarka xabadda ka saaraya waa cadow dadka iyo dowladnimada Galmudug ku soo duulay waana waajib in gacan bir ah lagu qabto”.